I-KANSAS YEYONA FLATTER KUNEPANCAKE - TYABA 2
Njengoko intetho endala ihamba EKansas , njengamazwe amaninzi asentshona, ithe tyaba njengepanekuku. Ngandlela-thile, i-pancake yaba ngumgangatho wegolide wokubamba, kodwa ngaba ngokwenene bafanelwe isihloko esinjalo? Iqela labaphandi abavela IYunivesithi yaseTexas State kwaye IYunivesithi yaseArizona State ndagqiba kwelokuba ndifumanise. Abaphandi bavavanya ngokwenzululwazi ukuba ingaba ilizwe laseKansas lalithe tyaba njengepanekuku, kwaye bamangaliswa koko bakufumanisileyo.
Iipancakes zinokucaba, kodwa aziyiyo imigangatho yegolide. Umbuso waseKansas ulungile kunepancake. Ngubani owayenokucinga ukuba oko kunokwenzeka? Abaphandi bayifumene le nto ngokuqokelela idatha kwi Uphando lweJografi laseMelika malunga ne-topography yaseKansas. Baye bafumana iisampulu zepancakes ngaphandle komnye ngaphandle kwesidlo sakusasa, INdlu yeHlabathi yePancakes . Bexhobe ngesayensi nesidlo sakusasa, abaphandi bangena kwilebhu.
I-lucifer yexesha le-4 eve actress
Abaphandi basebenzise imicroscope eyimfihlakalo ye-laser ukuthelekisa i-flatness quotient yepancake kwidatha ye-USGS malunga neKansas. Ukuze into icwecwe ngokugqibeleleyo (1.0) kuya kufuneka ukuba kungabikho manqaku mabini kumphezulu wayo kumanqanaba ahlukeneyo. Umtya wepancake we-2cm wabekwa phantsi kwemicroscope, kwaye abaphandi bafumanisa ukuba kuyamangalisa ukungahambelani (0.957) kunye neencopho ezibukhali kunye neqhuma embindini. I-Kansas, kwelinye icala, yayihle darn kufutshane nesikhundla esithe tyaba, esiza ngo-0.9997. Ngokwabaphandi, oku kwenza ukuba urhulumente athambe ngaphezu kwepanekuku.
Ngoku, oku akuthethi ukuba i-Kansas ithe tyaba njengokuba ifika, njengoko isilela ngokugqibeleleyo kwaye kuya kubakho iinduli okanye ezinye izinto ezi-spikey ezingayigcina kolo bizo, kodwa abaphandi bakwazi ukugqiba kwelokuba ipancake iyothusa kwaye ayifanelanga ukuba ngumgangatho wegolide wokucaba.
( Uphando olungenakwenzeka nge I09 , ifoto nge Wikimedia Commons )
ubuzalwana obugcweleyo bealchemist
Disney engapheliyo i-2.0 abalinganiswa abatsha
I-american ninja yeqhawe uStefano Amell
000 ukuya ku-999 uluhlu lwamanani
isivakalisi esisebenzisa bonke oonobumba
iswiss yomkhosi wemikhosi nge-usb
iking yemidlalo bhanyabhanya yaseKorea 2017